Thaabit Cabdi: Kubbadda cagta waxaan ku gaarnay Is-dhex-gal Bulsho – Puntland Post
Posted on December 23, 2017 December 23, 2017 by Liban Yusuf
Thaabit Cabdi: Kubbadda cagta waxaan ku gaarnay Is-dhex-gal Bulsho
Guddoomiyaha gobolka Benaadir ahna duqa Muqdisho Thaabit Cadi Maxamed ayaa hambalyo u diray xulka kubbadda cagta dowlad goboleedka Jubaland oo shalay ku guuleystay tartanka kubbadda cagta dowlad goboleedyada iyo gobolka Benaadir oo ka dhacay magaalada Muqdisho.
Thaabit ayaa u mahadceliyay Muqdishaawiyiinta, howlwadeennada gobolka Benaadir, wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada iyo xiriirka kubbadda cagta Soomaaliya oo suurtageliyay in uu tartankaan si guul ah ku soo dhamaaday.
“Muddada kooban gudaheed Ayaan ugu diyaar garoownay martigelinta koobka, maxaa yeelay waxaan ku kalsooneyn dadka reer Muqdisho oo martigelinta ku wanaagsan, xaqiiqdiinna waa laga dareemay habsami u socodka tartanka” ayuu yiri Duqa Muqdisho Thaabit Cabdi.
“Ujeedada ugu weyn ee aan tartankaan ka lahayn waxa ay ahayd inaan dib u soo celnno rajada dadkeena oo aan tusno muuqaalka wanaagsan ee dhallinyaradeenna oo aan dunida u sheegno inaan leennahay dhallinyaro dunida wax la qeybsan kara, taasna waad caddeyseen oo waan idiinkaga mahadcelineynaa”. Ayuu hadalkiisa ku sii daray.
Guddoomiyaha ayaa sidoo kale u mahadceliyay kooxaha tartanka ka qeyb galay oo muujiyay ciyaar wanaag, loollan xirfad ku dhisan iyo walaalnimo, waxa uuna ballan qaaday in Muqdisho oo shacabkeeda iyo maamulkeeda wadata ay mar walba diyaar u tahay martigelinta kulamada bulsho.
Markii labaad ayey magaalada Muqdisho martigelisay tartankan oo sabab u noqday isdhex-gal-bulsho isla markaana dalka ka muujiyay ifafaalo nabadeed.